'Luke Skywalker' သရုပ်ဆောင် မင်းသားကြီး Mark Hamill နောက်ဆုံးတော့ Walk of Fame ကြယ်ပွင့်ရရှိခဲ့ပြီ - MoviesFan
Mark Hamill သူ့အင်မတန်ဝမ်းသာနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို သူ့ရဲ့ twitter စာမျက်နှာကနေတစ်ဆင့် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ဒါကို “Dream Come True” လို့မပြောလိုပါဘူးတဲ့.. ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒီလို Walk of Fame မှာဂုဏ်ပြုခံရမယ်ဆိုတာကို စိတ်ကူးတောင်မယဉ်ဖူးတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
Hamill က သူပျော်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဒီတိုင်းပြောသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူလုံးဝကြည့်လို့မရတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ခနဲ့လိုက်ပါသေးတယ်။ အဲဒီ tweet ရဲ့ ဒုတိယအပိုင်းမှာ “သူ့အနေနဲ့ ဒီလိုဂုဏ်ပြုခံရတာနဲ့ ထိုက်တန်ရဲ့လားဆိုတာ သံသယဝင်မိပေမယ့် တစ်ယောက်သောသူက ဘာမှမဟုတ်တဲ့ Reality Show တစ်ခုတည်းကြောင့် ကြယ်ပွင့်ရရှိခဲ့တာကိုစဉ်းစားမိလိုက်တော့ စိတ်သက်သာရာရမိတယ်” လို့ ပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတစ်ယောက်သောသူဆိုတာက လက်ရှိအမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
Mark Hamill တစ်ယောက် Walk of Fame မှာ ဂုဏ်ပြုခံရမယ်ဆိုတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေက အတိုင်းထက်အလွန် ဝမ်းမြောက်နေကြပါတယ်။
Congrats, @HamillHimself! It’s deserved: never doubt it. 🙂
— Diane Duane (@dduane) February 22, 2018
Also shocked to learn you didn’t already have one. Beyond deserved.
— Jeff D Lowe (@JeffDLowe) February 22, 2018
When I visited Hollywood two andahalf years ago I looked everywhere for your and Carrie’s stars and was so disappointed that you didn’t have any. So happy for you now, can’t wait to go back and see it. Let’s hope Space Mom gets one as well in the future. <3
— Yes I Know (@WollyWollenberg) February 22, 2018
I thought you already hadastar. You’re an icon. pic.twitter.com/wVR5SOr5QO
— Alex Schulz! (@aschulz4223) February 22, 2018
Previous Post: YoonA နဲ့ Park Seo Joon တို့နှစ်ဦး အချိန်ပိုင်းအလုပ်သမားအနေနဲ့ ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်ကြမလဲ
Next Post: အားကစားနယ်ပယ်ထဲအထိ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ “Wakanda Forever”